Home Wararka Ex-Wasiir Caynte“Xannibaadda madaxdii hore waa daandaansi iyo bahdilaad”
Ex-Wasiir Caynte“Xannibaadda madaxdii hore waa daandaansi iyo bahdilaad”
Cabdiraxmaan Yuusuf Cali (Caynte) Wasiirkii hore ee wasaaradda qorsheynta Soomaaliya ayaa si xoogan u cambaareeyey xayiradii maanta lagu sameeyey Madaxweynayaashii hore ee dalka, Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sii jeeday magaalada Beledweyne.
Wasiirkii hore ee Qorsheynta ayaa sidoo kale ku eedeeyey madaxda dowladda federaalka inay ku tumanayaan Dastuuurka iyo shuruucda u taalla dalka.
“Xannibaadda madaxdii hore waa daandaansi iyo bahdilaad, waxayna muujineysaa kalsooni la’aanta madaxda Nabad iyo Nolol, ku tumashada dastuurka iyo hurinta fitnada, Falcelinta ugu habboon waa in lala tiigsado garsoorka, si ilbaxnima lehna looga dhiidhiyo. Fitnada ay N&N ku baaqeyso waa laga yimid!” ayuu uri Wasiirkii Caynte.
Hadalka Cabdiraxmaan Yuusuf Cali (Caynte) ayaa ku soo aadaya, iyadoo markii labaad xayiraad lagu sameeyey wafdi hoggaaminayo Sheekh Shariif Sheekh Axmed, inkastoo markii dambe la fasaxay, waxaana u jeedadoodu ay tahay kaliya qiimeynta xaaladaha ka jira gobolka Hiiraan oo uu fatahaad xoogan ka geystay wabiga Shabelle